Saraakiil ka socota Midowga Yurub iyo Amisom oo la kulmay Shariif Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Saraakiil ka socota Midowga Yurub iyo Amisom oo la kulmay Shariif Xasan
2nd February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Ssaraakiil ka socota Midowga Yurub iyo ciidamada AMISOM oo ay hormuud u ahayd Lydia Wanyote, ayaa maanta kulan la yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galdeeb ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadam.
Shirkan laba geesoodka ah ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo muhiim u ah dadka iyo deegaanka Koonfur-galbeed, waxaana diiradda lagu saaray kulanka qaabkii ciidamada Koonfur-galbeed qaybahooda kala duwan loo tayayn lahaa.
Qodobada kulanka looga hadlay ayaa tababaro, qalabeyn iyo tayeynta ciidanka maamulka, waxaa kaloo laga wada-hadlay qaabkii maamulka uu u yeelan lahaa xafiisyo qalabeysan iyo dhameystirka golaha wasiirrada iyo laamaha kale ee Koonfur-galbeed.
Waddooyinka magaalada Baydhabo ayaa dhamaantood maanta la xiray iyadoo la filayo in uu yimaada safiirka turkiga Somalia u fadhiya oo la filayo inuu manta gaaro Baydhabo.